Maalinta: 7 Oktoobar 2019
Qulqulka ugu weyn iyo qodista dhulka ee mashruuca Terminal Elmali Bus Terminal oo ay dhiseyso Dawladda Hoose ee Magaaladda Antalya. Terminalka, oo soo saari doona korontotiisa iyada oo ay ugu mahadcelinayaan muraayadaha qoraxda, ayaa sidoo kale ka muuqda dhinacyadeeda dhinaca deegaanka. Antalya Metropolitan Municipal in Elmali cusub [More ...]
Xarunta Isku-dubbaridka Gaadiidka (UKOM), oo lagu aasaasay qalab tikniyoolajiyadeed oo ugu dambeeyay gudaha Waaxda Gaadiidka iyo Maareynta Gaadiidka ee Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, waxay la shaqeysaa kormeerka iyo kormeerka mabda '7 / 24. Kaamirooyinka la dhigo meelaha muhiimka ah si joogto ah ayaa loola socdaa iyo ogeysiinta laga helo muwaadiniinta [More ...]
Beerta Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah, oo lagu soo dhoweeyo marti-sharaf badan oo ka kala socota gobollada deriska ah ee Kocaeli iyo dibedda, ayaa soo jiidata xiisaha weyn ee dadka ka fog diiqadda oo doonaya inay waqti ku qaataan dabiicadda. Maalinta midnimada iyo sidoo kale martida ka soo Turkey iyo dunida Ormanian [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli ma dayacayso inay ku qurxiso meelahan muuqaalka muuqaalka ah ka dib markay dhammaystirto mashaariicda sida wadooyinka, isgoysyada iyo isgoysyada. Waaxda Beeraha ee loo yaqaan 'Park Garden iyo Green Areas Department' waxay dhameystirtay aag cagaaran iyo midabyo midab leh oo loogu talagalay mashaaricda [More ...]
xubno badan Demiryolc Children Group Turkiga kaga keceen oo gobolladii badan, magaalada Selcuk Aydin kulmay museum tareenka ee summerhouse magaalada ka. Ku dhawaad ​​200 dadka ka mid ah Kooxda 'The Railroad Children Group' oo ay sameysteen warbaahinta bulshada ayaa ku kulma matxafka 'Camlik Steam Locomotive Museum' qiyaastii sannadihii 40 ka hor. [More ...]
15 maalmood tan iyo markii uu xafiiska yimid… 14 Highways to Bursa in muddo ah. Wadahadal khadka taleefanka ah oo lala yeeshay Öner Özgür, oo ahaa Maareeyaha Gobolka isla markaana hadda kaaliye u ah Maareeyaha Guud ee ka mas'uulka ah maalgashiga TCDD, waxaan weydiinay: ca [More ...]
Maanta, halkaasoo tareennada xawaaraha dheereeya ay noqdaan kuwo baahsan, Shiinaha wuxuu sii wadaa inuu si aan kala go 'lahayn uga shaqeeyo tareennada maglev-ka kuwaas oo lagu soo bandhigi doono bilihii la soo dhaafay. Macnaha guud, tijaabooyinka ugu horeeya waxaa lagu qaban doonaa bilowga 2020. Shiinuhu had iyo jeer waa waddan xawaare ku socda gaadiid tareenka ah [More ...]
Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Xawaaraha Sare. Howlaha ay bixiso Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha xiriirka la leh iyo agaasimayaasha guud ee la xiriira waxaa ku kordhay 20. Sharaxa koowaad wuxuu ka yimid Agaasimaha Guud ee Wadooyinka. Wadooyinka waaweyn, buundooyinka iyo [More ...]
Bal su’aasha ah maxaa ku dhacay mashruuca Kanal Istanbul imikay ii imid! Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa daqiiqadii ugu dambeysay amar ku bixiyay Kızılcıhamam'da. Waxay yiraahdaan ma sameyn kartid mashruuca Channel Channel, shaqadan aad ayey u dheeraatay. Mashruuca Channel İstanbul ayaa la faray inuu si dhakhso leh u bilowdo. CHP madax adag [More ...]
Agaasinka Guud ee Wadooyinka Waaweyn (KGM), maanta (7 Oktoobar) si uu u noqdo mid wax ku ool ah maadaama boqolkiiba boqol wadooyinka waaweyn iyo buundooyinka laga dhawaajiyo ay ku dhawaaqeen in celceliska boqolkiiba ay kordhayaan 20. Celcelis ahaan, 7 waxay quseysaa wadooyinka waaweyn iyo buundooyinka laga bilaabo Oktoobar ilaa 20 [More ...]
Wakiilo ka socda qolalka ay injineerada iyo naqshadaha dhismaha ee Sakarya ku xiran yihiin, ayaa la kulmay wakiilka shirkada ka fulisay mashruuca xariga wadada Sapanca. Abaalmarinta ayaa ku guuleysatay Bursa Cable Car [More ...]
Hindise ayaa loo qabtay ka-qaadidda tareennada Marmaray ee graffiti (rinjiyeynta ama qorista alaabada dadweynaha ama goobaha dadweynaha). Gaadiidka TCDD Co. Ku dhawaaqidii Agaasimaha Howlgalka Marmaray ee Gazette ayaa yiri: “Adeegga Dayactirka Gawaarida Marmaray [More ...]
Kooxda Anadolu Rail Systems Cluster (ARUS), oo xubin ka ah guddiga agaasimayaasha Ururka Rail Systems Association (ERCI), ayaa wakiil uga ah Turkiga Bandhigga Daawada Nidaamka Tareenka ee Ferroviara ee magaalada Milan, Italy. Isuduwaha Kooxda Xirmooyinka ee Anadolu Ilhami Pektas ayaa bayaan ku yiri; Milano Talyaani ee Milano [More ...]
Duqa magaalada Güngör wuxuu cadeeyay in u diyaar garowga xilliyeedka uu kusocdo Yedikuyular Ski Center wuxuuna intaa raaciyay: yerine Waxaan dhiseynaa guryo iib ah oo cusub oo siin doona martideena adeeg hufan oo aan badali karno qaab dhismeedka caadiga ah ee cunida iyo cabitaanka ee gobolka. Intaa waxaa sii dheer, soo bandhigista alaabada maxalliga ah ee xarumahayaga cusub [More ...]
Dowlada hoose ee magaalada Istanbul (IMM) ayaa bilaawday baaritaan ku saabsan shilkii maanta ka dhacay magaalada. Xaaladda dhaawaca rakaabka ah ee 13 ee la daweynayo ayaa si dhow loola socdaa. ETT, oo qabta shaqooyin muhiim ah si looga hortago shilalka noocan oo kale ah inay soo noqnoqdaan, waxay sidoo kale ku rakibi doontaa Nidaamka Digniinta Hore ee Uyarı ee gawaarida. [More ...]
Lataliyaha Duqa Magaalada Antalya ee Magaalo Weynta Antalya, wuxuu cadeeyay inay qorsheynayaan inay dhaxdhaxaad ka dhigaan garoonka Liman iyo Antalyaspor. Cem Oguz, "Haddii aan ka helno isha garoonka illaa galbeedka Kundu 16 kiiloomitir qaybta tareenka dhulka hoostiisa," ayuu yidhi. Oğuz Hop On Antalya [More ...]